Ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny fako lehibe - toro-hevitra
Misy fomba maro ahazoana fahalalana avy amin'ny Internet. Ny sasantsasany amin'ireo fitaovana dia natao ho an'ireo mpankafy mpankafy, ary ny hafa dia mety amin'ny orinasa sy marika. Raha te hamoaka ny angona avy amin'ny blaogy manokana na tranokala e-commerce ianao dia tokony hampiasa ireto fitaovana manaraka ireto izay mampanantena vokatra tsara.
Outwit Hub no fisintonana Firefox. Io no iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ny fanasarahana sy fampisehoana ireo angona lehibe avy amin'ny Internet - website developers online. Rehefa tafapetraka sy navitrika ny Outwit Hub dia hanome fahafahana fahafaham-barotra ho an'ny tranonkalan'ny tranonkalanao. Fantatra tsara indrindra amin'ny fampiasana ny angon-draketrany izy io ary tsy mitaky fahaizam-pampianarana mba hahazoana ny asa vita. Azonao ampiasaina ny Outwit Hub ho an'ny tranokala manokana sy tranonkala maimaim-poana. Ity maimaim-poana ity dia mety amin'ny fanombohana sy ny orinasa maoderina.
Safidy lehibe ho an'ny fanasitranana tranokala manontolo, bilaogy, tranonkala media sosialy ary RSS feeds. Miaraka amin'ny Spinn3r, afaka mandanjalanja sy mikaroka ny tranokalanao mora ianao. Mampiasa API izy io ary manome anao ny safidy hanivanana ny angona mora foana. Ny ampahany tsara indrindra amin'ity fandaharana ity dia ny fanitsiana ny angon-draketranao amin'ny fampiasana teny manan-danja manokana ary manampy amin'ny fampivoarana votoaty tsy misy dikany.
fitaovana feno ho an'ny fampihenana sy fampisehoana ireo angona lehibe ao amin'ny Internet. Fminer no fandaharana tsara indrindra amin'ny tranonkala mampifandray ny singa top-notch ary mampandeha mora foana ny tetikasam-pitrandrahana data. Raha efa namolavola blôgy ianao ary te hampitombo ny orinasa dia tokony hampiasanao Fminer ny angon-drakitra amin'ny pejy maro araka izay azo atao. Afaka mandamina mora foana ny tetikasa izay mitaky ny lisitry ny crawls sy ny lisitry ny server proxy.
Ity fitaovana ity dia tsara ho an'ny tranokala maimaim-poana sy ny datim-pandaminana izay tsy manelingelina ny kalitao. Dexi. Izany dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra sy mora indrindra ho an'ny fanasitranana sy fampisehoana ireo angona lehibe. Ity fitaovana ity dia mamela antsika hanangana mpitsikilo ary mamoaka ny angon-drakitra amin'ny fotoana voafetra. Izy io no mahafantatra tsara indrindra ny interface-friendly, ary ny tahirin-kevitra dia voavonjy mivantana amin'ny Box. net na Google drive. Azonao atao ihany koa ny mandefa ny rakitrao amin'ny CSV sy JSON.